e-Government 1.000 TL Social Support Inquiry! Pandemi ကွင်းဆင်းလျှောက်လွှာရလဒ်များ RayHaber | raillynews
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီဗဟို Anatolia ဒေသကြီး06 တူရကီe-Government 1.000 TL Social Support Inquiry! Pandemi လူမှုဖူလုံရေးလျှောက်လွှာ
14 / 05 / 2020 06 တူရကီ, ဗဟို Anatolia ဒေသကြီး, အထွေထွေ, coronavirus, ခေါင်းစီးသတင်း, နောက်ဆုံးမိနစ်, တူရကီ
e-Government 1000 TL ကပ်ရောဂါအထောက်အပံ့ကိုအဆင့် (၃) တွင်လျှောက်ထားသည်။ လူမှုဖူလုံရေးငွေကြေး၏ပထမနှင့်ဒုတိယအဆင့်ငွေပေးချေမှုကိုလိုအပ်သူများအားပေးခဲ့သည်။ တတိယအဆင့်3TL လူမှုရေးအထောက်အပံ့လျှောက်လွှာများအတွက်မည်ကဲ့သို့လျှောက်ထားရမည်ကိုအသေးစိတ်သိလိုသည်။ 1 TL ကိုဘယ်လိုလျှောက်ရမလဲ၊ ဘယ်သူရနိုင်မှာလဲ။
မိသားစုအလုပ်သမားနှင့်လူမှု ၀ န်ဆောင်မှု ၀ န်ကြီးဌာနမှပေးသော TL ၁၀၀၀ ၏လူမှုဖူလုံရေးခံစားခွင့်အတွက်တတိယအဆင့်လျှောက်လွှာများသည်စီးပွားရေးတွင်ထိခိုက်သော Coronavirus ကူးစက်ရောဂါခံစားနေရသောနိုင်ငံသားများအားဆက်လက်လျှောက်ထားသည်။ မိသားစု၊ အလုပ်သမားနှင့်လူမှု ၀ န်ဆောင်မှု ၀ န်ကြီး Zehra ZümrütSelçukက“ ၃ ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဆင့်ကွင်းဆင်းအစီအစဉ်အတွက်လျှောက်လွှာ ၆ သန်းကျော်ကိုကျွန်ုပ်တို့ရရှိခဲ့တယ်။ အခုချိန်ထိအဆင့် (၃) မှာငွေပေးချေမှုပေါင်း ၆၂၀,၀၀၀ ရှိပြီ” ဟုပြောသည်။ လူမှုအကူအညီအထောက်အပံ့များကိုရယူလိုသောနိုင်ငံသားများသည် e-Government စနစ်မှစုံစမ်းမေးမြန်းသည်။
1000 TL PANDEMIC လူမှုရေးအထောက်အကူပြုလျှောက်လွှာကိုဘယ်လိုဖွင့်ရမလဲ။ (E-Government)
လူမှုဖူလုံရေးခံစားခွင့် 1000 TL ၏အကျိုးခံစားခွင့်သည် Corona virus ကြောင့်လိုအပ်နေသူများအားပေးဆောင်သည်။ 1000 TL ကပ်ရောဂါအထောက်အပံ့လျှောက်လွှာများကို e-Government မှတဆင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ လူမှုအကူအညီငွေကြေးတတိယအဆင့်အပလီကေးရှင်းများအားလျှောက်လွှာများကို TR အမှတ်အသားနံပါတ်၏နောက်ဆုံးနံပါတ်အရသိရသည်။
E-Government ရှိ Pandemi Social Support Programme မှတတိယအဆင့်လျှောက်လွှာများကိုစတင်ခဲ့သည်။
သင်၏ TR Identity နံပါတ်၏နောက်ဆုံးဂဏန်းအရ၊
၁၀၀၀ TL လူမှုရေးအကူအညီ MONEY ၏မေးမြန်းမှုသည်အဘယ်နည်း။
e-Government မှတစ်ဆင့် TL လူမှုဖူလုံရေးခံစားခွင့် ၁၀၀၀ ကိုမေးမြန်းရန်၊ သင်၏ e-Government အကောင့်သို့အောက်ပါလင့်ခ်ဖြင့်ဝင်ရောက်ပါ။ ထို့နောက်ရှာဖွေရေးခလုတ်မှတဆင့်မိသားစု ၀ င်၊ အလုပ်သမားနှင့်လူမှု ၀ န်ဆောင်မှု ၀ န်ကြီးဌာန၏“ လူမှုကူညီစောင့်ရှောက်မှုဆိုင်ရာအချက်အလက်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး” ကဏ္ go ကိုသွားပါ။ ထိုအခါမေးမြန်းဖို့ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
လူမှုရေးအကူအညီနှင့်စည်းလုံးညီညွတ်ရေးဖောင်ဒေးရှင်းအားဖြင့်, လူမှုကူညီစောင့်ရှောက်မှုနှင့်သွေးစည်းညီညွတ်မှုဆိုင်ရာမက်လုံးပေးမှုဥပဒေအမှတ် ၃၂၉၄ သို့မဟုတ် ၂၀၂၂
လတ်တလောတွင်တူရကီနိုင်ငံသား ၆၅ နှစ်အောက်တူရကီနိုင်ငံသားများအားလစဉ်ချည်နှောင်ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း။ ဥပဒေအရလိုအပ်ချက်၊ အားနည်းမှုနှင့်မိဘမဲ့ (ပုံမှန်ပင်စင်၊ သက်ကြီးရွယ်အိုပင်စင်၊
စိတ်ကျန်းမာရေးနှင့်ဘဏ္Financialာရေးဆုံးရှုံးမှုများရှိသည့်တီဘီရောဂါနှင့် SSPE လူနာများအတွက်ပုံမှန်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုအစီအစဉ်ကိုစီးပွားရေးတည်ငြိမ်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအထောက်အပံ့ပံ့ပိုးမှုအစီအစဉ်၏အတိုင်းအတာအတွင်းလျှောက်ထားစရာမလိုဘဲပေးဆောင်ရမည်။
HGS သည်ချိုးဖောက်မှုပြစ်ဒဏ်စစ်ဆေးခြင်း | Traffic Penalty Inquiry | HGS လက်ကျန်ငွေရှာဖွေရေး ...
TCDD 2018 စခန်းလျှောက်လွှာရလဒ်များကြေညာလိုက်သည်
ကြေညာလိုက်သည် TCDD 353 ပြည်သူ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအလုပ်သမားပစ္စည်းဝယ်ယူရေးလျှောက်လွှာရလဒ်များ
TCDD 2019 Caravan တစ်နှစ်တာလျှောက်လွှာရလဒ်များကြေညာလိုက်သည်
TCDD7။ လှေငြိမ်၏ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှု 30.000 m³ဝယ်ယူတင်ဒါရလဒ်ဖြစ်ပါတယ်
Sirkeci - Uzunköprüလိုင်းလမ်းမကြီးပြုပြင်မွမ်းမံရေးစီမံကိန်းကို, Halkalı - Çerkezköy ဘူတာ ...
Bursa မြန်နှုန်းရထားလမ်းစီမံကိန်းကို 2012 150.000.000 တစ်နှစ်ဘတ်ဂျက်နှုန်းအဖြစ်ရာအရပျကိုယူထားပါတယ်